Ahoana ny fomba hanampiana ny fanarahana ny fanentanana amin'ny Google Analytics amin'ny Hootsuite | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanampiana ny fanarahana ny fanentanana amin'ny Google Analytics amin'ny Hootsuite
Wednesday, May 9, 2012 Alarobia 22, 2018 Douglas Karr
Omaly dia nanambara izany izahay DK New Media dia nantsoina hoe a Hootsuite Vahaolana mpiara-miasa. Nampiasa ny Hootsuite Pro kaonty mandritra ny roa taona ary tiako ireo endri-javatra mitohy sy ny fahafaha-manome izany amin'ny fanomezana ny ekipanay. Ary… ampahany amin'ny vidin'ny ankamaroan'ny motera fanontana ara-tsosialy izany.
Izahay dia nanery ny mpanjifanay rehetra hanararaotra ny fanarahan-dia amin'ny fanentanana rehefa mandefa ny rohin'izy ireo Hootsuite. Betsaka ny olona no mihevitra fa mila manoratra tanana an'io querystring URL io - saingy Hootsuite raha ny marina dia manolotra interface tsara be ho an'ny fampidirana ny mombamomba ny fanentanana fanentanana.
Ny querystring fampielezan-kevitra dia misy masontsivana 5:
Loharanon'ny fampielezan-kevitra (utm_source) - masontsivana takiana. Mampiasà utm_source hamantarana motera fikarohana, anaran'ny mailaka na loharano hafa. ohatra: utm_source = Google
Mediam-panentanana (utm_ Medium) - masontsivana takiana. Mampiasà utm_ Medium hahitana mpanelanelana toy ny mailaka na click-per- click. ohatra: utm_medium = CPC
Fe-potoana fampielezana (utm_term) - masontsivana tsy voatery. Nampiasaina tamin'ny fikarohana karama. Mampiasà utm_term hanamarihana ireo teny lakile amin'ity doka ity.
ohatra: utm_term = mihazakazaka + kiraro
Votoatin'ny fampielezan-kevitra (utm_content) - masontsivana tsy voatery. Nampiasaina tamin'ny doka A / B sy doka kendrena votoaty. Mampiasà utm_content hanavahana doka na rohy izay manondro URL mitovy. ohatra: utm_content = logolink or utm_content = textlink
Anaran'ny fampielezana (utm_campaign) - masontsivana tsy voatery. Nampiasaina tamin'ny famakafakana teny lakile. Mampiasà utm_campaign hamantarana fampiroboroboana vokatra manokana na fampielezan-kevitra stratejika. ohatra: utm_campaign = spring_sale
Ity misy akaiky indrindra izay nametrahantsika ny URL hananana Fanarahana ny fanentanana Google Analytics. Raha manamarina ilay boaty tsy voatery ianao dia azonao atao ny mampiditra fanarahana fanentanana isaky ny URL. Tsy hevitra ratsy izany… ary mety hahatonga anao any amin'ny radar amin'ireo tranonkala ivelany izay andefasanao fivezivezena referral be dia be.
Rehefa mampiditra ny URL ao amin'ny faritra misy ny rohy ianao, dia hahita fitaovana iray azonao tsindriana mba hampidinana ireo saha mandroso mba hanampiana ny fanarahan-dia. Ny iray amin'ireo preset dia efa Google Analytics. Raha mampiasa tranonkala hafa ianao Analytics sehatra, azonao atao tsara ny manampy ny preset anao manokana eto!
Hizara torohevitra sy tetika maro be eto izahay momba ny fomba fampiasana tanteraka Hootsuite Pro ho an'ny paikadin'ny media sosialy ataonao. Fampahafantarana: Hizara rohy mpiara-miasa koa izahay rehefa mandefa ireo lahatsoratra ireo.
Tags: fanaraha-maso analyticsfanarahana ny fanentananaGoogle Analyticshootsuite
Ny Big Data dia mitondra isa marobe amin'ny marketing
Context, Fahitana ary fizarana hadalana
May 24, 2012 amin'ny 7: 34 AM
Misaotra anao amin'ity lahatsoratra tsara ity! Tena tiako ny mianatra momba ireo torohevitra ireo!